ကလေးကို မဖြစ်မနေ ပေါင်ဒါသုံးမှဖြစ်မယ်ဆို ဘယ်လိုသုံးသင့်သလဲ? – BurmeseHearts
ကလေးကို မဖြစ်မနေ ပေါင်ဒါသုံးမှဖြစ်မယ်ဆို ဘယ်လိုသုံးသင့်သလဲ?
သေးစို ၊ ရေစို၍ ကလေးဖင်ခြောက်သွေ့အောင် လိမ်းချင်သပဆိုလျှင် ပေါင်ဒါကို ခြောက်လအောက် ကလေးကိုယ်ပေါ်၌ တဖတ်ဖတ် ရိုက်ပြီးလိမ်းပေးခြင်းအား ရှောင်သင့်သည်။ သေးမှုန်သော ထိုပေါင်ဒါမှုန့်များသည် လေထုထဲမှတဆင့် ကလေးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းသို့ ရောက်သွားနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ပေါင်ဒါတို့ပတ်တွင် ပေါင်ဒါပါရုံလောက်တို့ပြီး မိမိလက်ဖမိုးဖြင့် ပေါင်ဒါသိပ်သွားအောင် ဖြေးညှင်းစွာ ပွတ်ပြီးမှ မိမိလိမ်းပေးလိုသော ကလေး၏ ကိုယ်အောက်ပိုင်းကို ပွတ်လိမ်းပေးနိုင်သည်။
ကလေးခါးတောင်းကျိုက် (Diaper) သုံးတဲ့မိဘတွေ ဘာသတိထားသင့်သလဲ?
BurmeseHearts	 Jun 7, 2015 0
ပဋိသန္ဓေတည်ခြင်း လက္ခဏာများ အပိုင်း(၁)
ကလေးကိုယ်ပေါ်က ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှုအထွေထွေကို စစ်ဆေးဖို့…
သမထနဲ့ ဘာဝနာအား လေ့လာခြင်း
မိဘနှင့် အနေဝေးသောကလေးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု